NGO को ठगि धन्दा ! - Bishwo Khabar
कमला ओली शिवाकोटी
वुमन याक्ट (Women Act) र ब्यक्तिगत कन्सल्टेन्ट बिच १८ नोभेम्बर २०१९ को अन्तर कथा–ब्याथा ।
सन् २०१९ नोभेम्बरको कुरा हो, म स्थानीय तहमा तालिम संचालनको लागि सप्तरी जिल्लाको राजगढमा थिएँ । एउटा अपरिचित नम्बर बाट फोन आयो, फोन रिसिभ गरे । उहाँले तपाईं फलानो होइन भन्नुभयो मैले हो भने । तपाईंको नाम र नम्बर बिन्दु जि ले दिनु भयको हो भन्नु भयो मैले ए अँ भन्ने जवाफ फर्काएँ । उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभयो, म सृजना अधिकारी हो भन्नु भयो । दुबै तिर चीनजान भयो । उहाँले फोन गर्नुको उद्देश्य बताउनु भयो । हाम्रो युएसआइडि पानी प्रोजेक्टको कार्यक्रम हो, एउटा जेण डर म्यानुयल बनाउनु थियो भन्नू भयो । मैले कहिले गर्नु पर्ने हो भन्ने प्रश्न सोधेँ । उहाँले डिसेम्बरमा प्रोजेक्ट सकिन्छ सकेसम्म छिटो गर्नु पर्छ भन्नु भयो । मैले सकिन्न मलाई फुर्सद छैन भने यत्तिकैमा सम्बाद्को अन्त भयो ।
दुई हप्ता पछि म काठमाडौ फर्किसकेको थिएँ । त्यही पहिला संवाद गरेको फोन बाट फोन आयो । मैले रिसिभ गरे, पहिले जानपहिचान भएकोले संवाद अघि बढयो अनि त्यही म्यानुयलको कुरा भयो अनि मैले पैसा र समयको कुरा गरेँ । त्यसमा उहाँले एक हप्ताको समय र प्रतिदिन ६/७ हजार दिने कुरा गर्नुभयो । मैले काम गर्न नसकिने जबाफ दिए । उहाँले होइन हामी सङ धेरै काम छ यसैको पनि तालिमहरु धेरै छ्न भन्नु भयो । एकपटक अफिसमा आउनुसन भन्नु भयो मैले पनि सहमति जनाए र भेट्ने समयको मिति तय गरियो ।
तोकिएको समयमा म सृजना अधिकारीको अफिसमा गए । नयाँ ठाँउ भएकोले सोध्दै खोज्दै अफिसमा पुगेँ । एनजीओ को अफिस हाई फाई नै रहेछ । म उहाँको अफिस पुगेको जनाउ दिएँ । मैले उहाँलाई फोनमा मात्रै सम्पर्क भएको तर नदेखेको भएकोले तपाईं हो सृजना भन्ने तबरले प्रश्न गरेँ । उहाँले टाउको हल्लाउनु भयो । मिटिङ हलमा बसेर छलफल शुरु भयो । उहाँहरु दुई जना सहभागी हुनुभयो । कुमार खड्का र सृजना अधिकारी । छलफलमा दिन पैसा र म्यानुयलको विषयमा केन्द्रित थियो । उहाँहरुले एक हप्ता प्रस्ताव गर्नु भयो । प्रतिदिन ७ हजार प्रस्ताव गर्नु भयो, मैले सम्भव नरहेको बताएँ । त्यसपछि उहाँहरुले मिठो गरेर अरु धेरै काम छ यसैको तालिमहरु पनि छ, सबै कामहरु तपाईंलाई दिउँला भनेर आस्वस्त पार्नु भयो । मैले १५ दिन र १२ हजार प्रती दिन सम्म दिनुहोस भने उहाँ हरुले त्यसो होइन १० दिन र ८ हजार प्रस्ताव गर्नु भयो । अरु काम पनि दिउँला भनेर विथ वाउट टयाक्स भन्ने सहमती भयो । मौखिक सहमति पछि म घर फर्किएँ ।
मेरो मनमा लिखित सम्झौता नगरी काममा लाग्नु हुन्न भन्ने लागेर सम्पर्क गरेँ । हामी अफिस सरिसकेका छौँ, बसुन्धरा आउनुस भन्नु भयो । म बसुन्धरा गएर सम्झौता गरेर आएँ । सम्झौता गरेर आइसकेपछि पनि काम गर्न नसक्ने देखेर नभ्याउने इमेल गरेँ । उहाँले फेरी अनुरोध गर्नु भयो र काम गर्न शुरु गरेँ । दिनरात नभनिकन काम सकाएर पठाएँ र फोन गरेर डकुमेन्ट पठाएको जानकारी गराएँ । काम सकिसकेपछि जसलाई पनि आफ्नो पारिश्रमिकको कुरा हुन्छ । धेरैदिनको पर्खाइमा पनि काम गरेको पैसा नाअएपछि कुमार जिसँग सम्पर्क गरेँ तर उहाँ पन्छिनु भयो ।
विषयबस्तुको बारेमा कम्युनिकेसन कुमार खडकासँग इमेलमा हुन्थो । कहिलेकाहीँ टेलीफोनमा । एकाएक मेरो मनमा लिखित सम्झौता नगरी काममा लाग्नु हुन्न भन्ने लागेर सम्पर्क गरेँ । हामी अफिस सरिसकेका छौँ, बसुन्धरा आउनुस भन्नु भयो । म बसुन्धरा गएर सम्झौता गरेर आएँ । सम्झौता गरेर आइसकेपछि पनि काम गर्न नसक्ने देखेर नभ्याउने इमेल गरेँ । उहाँले फेरी अनुरोध गर्नु भयो र काम गर्न शुरु गरेँ । दिनरात नभनिकन काम सकाएर पठाएँ र फोन गरेर डकुमेन्ट पठाएको जानकारी गराएँ । काम सकिसकेपछि जसलाई पनि आफ्नो पारिश्रमिकको कुरा हुन्छ । धेरैदिनको पर्खाइमा पनि काम गरेको पैसा नाअएपछि कुमार जिसँग सम्पर्क गरेँ तर उहाँ पन्छिनु भयो । सृजना अधिकारी संग सम्पर्क गरे पैसा पठाउने भनेर आस्वस्त पार्नुभयो ।
धेरै समय बितिसक्यो मार्चमा मैले म्यासेज गरे उहाँले आफू काठमाडौ बाहिर भएकोले फर्केपछि दिने उत्तर दिनुभयो । कुर्नु बाहेक कुनै बिकल्प थिएन । कुर्दाकुर्दै फेरी महिनौ बित्न लाग्यो तैपनि पैसा आएन । त्यो समय कोभिड–१९ को माहामारी शुरु भइसकेको थियो । सरकारले लकडाउन गरेको थियो । पैसा न आएकोले फेरि सृजना अधिकारीसँग सम्पर्क गरेँ अफिस खुले पछि तपाईंले पैसा पाउनु हुन्छ भनेर आस्वस्त पार्नु भयो । अब चाहिँ मनमा विभिन्न शंका आउन थाल्यो । लकडाउन खुल्यो अँझपनि पैसा दिने कुनै कुरै भएन। त्यसपछि फेरी सम्पर्क गरेँ खाता नम्बर दिनुस् पैसा एकाउन्टेन्टले पठाइदिन्छ भन्नुभयो । एकाउन्टेन्टलाई सम्पर्क गरेर खाता नम्बर पठाए । खाता नम्बर पठाएको १५ औ दिन हुँदा पनि पैसा आउदैन । नियमित म्यासेज हेर्छु पैसा आउँछ कि भनेर । तर एकदिन पैसा आयो २० हजार म झसङ्ग भए किन यती मात्रै पैसा ?, तुरुन्तै सम्पर्क गरेँ फोन उठाउनु भएन । मैले त्यसपछि म्यासेज गरेँ म्यासेजको रेस्पोन्स पनि पाईन ।
त्यसैले यो लेख्न बाध्य भएँ । यस्ता किसिमका ठगिलाई नियमनाकारी निकाय समाज कल्याण परिषदमा पनि उजुरी गरेको छु । सायद यो सरकारले अनुगमन गरेर यस्ता पिर मर्का र गुनासोहरुलाई सुनुवाई गरेर न्याय दिलाउने छ । दुई पक्षिय भएका टेलिफोन संवाद, ईमेल र सम्झौता सुरक्षित छ । यसै सुचना बाट सम्बन्धित (युएसएआडि पानी प्रोजेक्ट, समाज कल्याण परिषद) पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । साथै सम्झौता भएका प्रमाणहरु यसैसाथ संलग्न गरेको छु ।
सम्झौताका संलग्न कागजात प्रमाणहरु :
Previous articleवानप्लस एट स्मार्टफोन नेपाली बजारमा, कति पर्छ मूल्य ?
Next articleझापामा घाँटी काटेर युवकको हत्या